Hordhac: Red Star v Liverpool – Reds Oo Lagu Jeer La Dubtay Saddex Kulan Oo Ay Wajahaday Kooxda Yar %
Hordhac: Red Star v Liverpool – Reds Oo Lagu Jeer La Dubtay Saddex Kulan Oo Ay Wajahaday Kooxda Yar
Labadaan kooxood ayaa wada dheeli doona kulankii afaraad oo ay isaga hor-yimaadaan tartamo kala duwan, xili labo kamid ay ay badisay naadiga Red Star, halka labo kale la dubtay Liverpool.
Dheeshani waxay ka tirsan tahay heerka Group-yadda ee tartanka Champions League waana lugta labaad oo ay kooxahaan iska hor-imaanayaan.
Kooxda heysata horyaalka Serbia ee haatan haysata ayaa soo xaadiray halka ay ka baxeen xilli ciyaareedkii hore; waxay ku fadhiyaan kaalinta ugu sareysa horyaalka, iyagoo leh 43 dhibcood ka dib 15 kulan xilli ciyaareedkan.
Nasiib darro kooxo ka dhisan Belgrade, qaabkooda qaab ciyaareedka Champions League ayaa ka dhigaya waxyaabo badan oo loo baahan yahay, inkastoo ay ku jiraan kooxo dhimasho ah oo ay la socdaan PSG, Napoli iyo Liverpool.
Crvena Zvezda ayaa si aad ah u caan baxday markii ay 4-0 kaga soo badiyeen Liverpool bishii hore, waxaana ay rajeyneysaa inay cadaadis badan ku qabato kulanka ay gurigooda ku ciyaari doonaan Talaadada.
Kaliya xulashada shaki la gelinayo kulankaan ayaa la ciyaari doona kooxda Merseyside Milan waa goolhayaha Milan Borjan, oo seegay Red Star guushii Proleter. Si kastaba ha ahaatee ciyaaryahanka ayaa la filayaa inuu taam u noqdo kulankaan.
Ka dib markii ay barbaro 1-1 ah la gashay Emirates sabtidii, Liverpool ayaa ka hooseysay heerka sare ee horyaalka Premier League. Reds ayaa haatan labo dhibcood ka dambeysa kooxda difaacaneysa horyaalka ee Manchester City.
Mid ka mid ah ciyaartoyda Reds ee safarkan muhiimka u ah ee Belgrade ayaa ah ciyaaryahanka khadka dhexe Xherdan Shaquiri. Tababaraha Jurgen Klopp ayaa doonaya inuu ka fogaado rikoorka ku haboon ee ciyaaryahanka, kaasoo ku dhibsaday Serbians intii lagu jiray xagaaga isagoo dabaaldegaya Koobka Adduunka ee Albania.
Kabtanka kooxda Liverpool Jordan Henderson ayaa diyaar u ah inuu taam u noqdo ka dib markii uu seegay seddexdii kulan ee ugu danbeysay ee uu dhaawac ku maqnaa, halka ciyaaryahanka khadka dhexe Naby Keita uu shaki ku jiro, lakiin weli waxa uu safar ku tagay kooxda.
Cauimhin Kelleher oo 19 jir ah ayaa lagu soo daray liiska ciyaartoyda ugu fiican xilli ciyaareedkan. Si kastaba ha ahaatee, goolhayaha ayaa u muuqda inuusan ku dhicin Alisson ama xitaa lambarka 2 Mignolet si uu ugu ciyaaro Belgrade.
Champions LeagueRed Star v Liverpool
Tababaraha Barca Oo Ka Hadlay Hadii Leo Messi Uu Kusoo Bilaabanayo Kulanka Inter Ee Champions League
Hordhac: Atletico Madrid v Dortmund – Labada Koox Oo Isha Ku Haya Inay Xaqiijistaan Booska 16-ka